စိတ်ကြွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အုပ်စုလိုက်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာသိမှုအပြုအမူကုထုံးကိုကျပန်းကျပန်းထိန်းချုပ်ခြင်းလေ့လာခြင်း (၂၀၁၉၉) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
J ကိုလိင် Med ။ 2019 May;16(5):733-745. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.03.005.
Hallberg J ကို1, Kaldo V ကို2, Arver S က1, Dhejne ကို C3, Jokinen J ကို4, Öbergကီလိုဂရမ်5.
Hypersexual ရောဂါ (HD ကို) ကိုတစ်ဦးချင်းစီဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်သော့ချက်ဘဝဒေသများအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှဦးဆောင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုရှုံးထားတဲ့အတွက်အခွအေနေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ သိမှုအမူအကျင့်ကုထုံး (CBT) hypersexual အပြုအမူ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချဖို့သက်သေပြခဲ့ပြီး; သို့သော် HD ကိုများအတွက် CBT ကြားဝင်မရှိ randomized ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့သည်။
HD ကိုများအတွက်အုပ်စုကိုအုပ်ချုပ်ခွင့် CBT ၏ထိရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်။
HD ရောဂါရှိအမျိုးသားပါ ၀ င်သူများ (n = 137) သည် ၇ ပတ်အတွင်းအုပ်စုလိုက်အုပ်ချုပ်သော CBT (n = 7) နှင့် ၈ ပတ်အကြာတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလက်ခံရရှိသည့်စောင့်ကြည့်စာရင်းမှခွဲခြားထားသည်။ ၃၊ ၆ လအကြာတွင်နောက်ဆက်တွဲကုသမှုများကိုကြိုတင်၊
လက်ရှိအကဲဖြတ်စကေး (HD ကို: CAS) နှင့်အလယ်တန်းရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS) တို့စိတ်ကျရောဂါ၏အစီအမံ (Montgomery-Åsbergစီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့သည် Rating စကေး (Madre-S က), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ (လက်တွေ့ရလဒျမူလတန်းရလဒ် Hypersexual Disorder ခဲ့သည် ပုံမှန်အကဲဖြတ်ခြင်းရလဒ်တိုင်း (CORE-OM), နှင့်ကုသမှုစိတ်ကျေနပ်မှု (CSQ-8) ၌တည်၏။
တစ်ဦးက HD ကိုရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ကျဆင်းခြင်းအဖြစ်စိတ်ရောဂါသုခချမ်းသာအတွက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်တိုးတက်မှုသည် waitlist နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကုသမှုအခွအေနေအဘို့အတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုကုသမှုပြီးနောက်3နှင့်6လအတွင်းမှာတည်ငြိမ်နျြရစျ။
CBT အဆိုပါ CBT အစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့ setting တွင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး-line ကိုကုသမှုအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, HD ကိုရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့စိတ်ရောဂါဒုက္ခဆင်းရဲ ameliorate နိုင်ပါတယ်။
ဒါကပထမဦးဆုံး HD ကို-တိကျတဲ့ရောဂါယောက်ျားတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကြီးမားသောနမူနာတစ်ခု CBT အစီအစဉ်၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု randomized ဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်ကုသမှုသက်ရောက်မှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတိုင်းတာအပေါ်အနိမ့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းဖို့မရေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, hypersexual မိန်းမတို့အဘို့ဤအစီအစဉ်၏ထိရောက်မှုမသိသောနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒီလေ့လာမှုက HD ကိုများအတွက်ကုသမှု option ကိုအဖြစ်အုပ်စုတစုအုပ်ချုပ်ခွင့် CBT အစီအစဉ်၏ထိရောက်မှုကို support; သို့သော်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအမြိုးသမီးမြားလညျးပါဝငျသငျ့တယျ, အင်တာနက်ကနေတဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြားဝင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အခြားကုသမှုကို formats အကဲဖြတ်ရန်ဥပမာ, အုပ်ချုပ်ရေးပါဝင်သည်။
KEYWORDS: အခြေခံပညာသိပ္ပံအထီးအမူအကျင့်, အထီးလိင် Desire Disorders; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အမျိုးသားလိင်
ကုထုံးကြားဝင်အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်, ဒီ hypersexual အပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးကွဲများ၏ကုသမှုအတွက်ပိုပြီး "ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်မှု" ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနိဂုံးအားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့ပါတယ် "အလားအလာ။ " 54 အဆိုပါ ICD-11,3 ၏တည်းဖြတ်မူအတွက်ရောဂါရှာဖွေအမျိုးအစား compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များအတွက်အပိုင်းများတွင်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက် HD ကိုသူတို့အားများစွာသောတူညီဘွားလ နှင့်, လူမှုရေးဖြစ်နိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများအပေါ်ပိုမိုပျော့ပြောင်းသုတေသနယခုဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။ ဤသည်အလှည့်အတွက်တိကျစွာဆောက်လုပ်ထားနှင့်ထိရောက်မှုကုသမှုရွေးချယ်စရာအပေါ်သုတေသနပြု enable ပေမည်။
Rettenberger et al23 hypersexual အပြုအမူ၏အရေးအပါဆုံးခန့်မှန်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖော်ထုတ်သော်လည်း, ဒါဟာလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (ဖှလူကြီးများနှင့်အတူဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူတွေကိုနှင့်တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ (ဥပမာညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူတွေကိုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ယူဆကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ ဒါဟာတာရှည်, HD ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်အလေးပေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ sensation- နှင့်တကွ, တဦးတည်း hand1,53 အပေါ်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းများအတွက်မဟာဗျူဟာအဖြစ်အသုံးပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်လိင်လှုံ့ဆော်မှုခွအေနအေသို့ subclassified နိုင်စောဒကတက်ထားသည် အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရှာကြံ။ ဖှလူကြီးများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထပ်မံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ရေတိုရေရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးထပ်ခါတလဲလဲတည်ထောင်ခြင်း၏ဥပမာထပ်ခါတလဲလဲဝယ်ယူမှုအပေါ်ကိုအခြေခံပြီးခွဲခြားနိုင်ပါသည်။